"Nandray ny teny tamin’ny zotom-po indrindra ireo ka nandinika ny Soratra Masina isanandro, na marina izany, na tsia." Asan’ny Apostoly 17:11
Raha nanao fitetezam-paritra ity mpanara-maso iray fahiny, dia nanontaniany ny tompon’andraikitra ao amin’ny paositra hoe: «Ianao ve isanandro manitsy tsara ny famantaranandronao amin’ny an’ny fampielezam-peo?
-Tsia, tompoko, hoy izy namaly, fa ampitoviako ihany amin’ny an’ny lapan’ny tanàna itsy ampita itsy»
Lasa ilay mpanara-maso, ary nandalo tao amin’ny lapan’ny tanàna, nanontany ny mpiandry trano hoe: «Marina tsara ve ny famantaranandronareo?» Dia hoy ilay lehilahy namaly: «Izany hoe, ny an’ny paositra no anitsiako azy, ary hitako fa tsy miovaova. Fantatrao ihany fa marina mandrakariva anie ny oran’ny paositra e!».
Araka izany, dia samy resy lahatra ny andaniny sy ny ankilany fa manana ora marina, miantehitra amin’ny an’ny eo ampitany, antoka tsy zarizary…
Ry kristiana namana, raha ny fitondrantenan’ny rahalahy na anabavy amin’ny finoana no anitsiantsika ny antsika, dia mety hifamitaka ihany isika. Ny hany fenitra tsy mety diso, mba hitantana antsika amin’ny fankatoavana an’Andriamanitra, dia ny Baiboly. Mamaky izany isanandro ve isika? Mpitari-dalana azo antoka sy efa vita sedra ny Baiboly, maneho amintsika an’i Jesosy, Ilay nirahin’Andriamanitra, Ilay Mesia. Taominy isika tsy hanaraka ny fitsipi-piainana mitarika izao tontolo izao, fa mba ho tonga mpanahaka an’Andriamanitra, ary “handeha amin’ny fitiavana” sy “amin’ny mazava”, toa an’i Kristy: “Aoka hanahaka an’Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala; ary mandehana amin’ny fitiavana, toy ny nitiavan’i Kristy anareo, dia ny nanolorany ny tenany ho fanatitra sy fanavotana” (Efesiana 5:1-2). Aoka handeha “eo amin’ny mazava isika, tahaka Azy eo amin’ny mazava” (1 Jaona 1:7).
Inona no ho fenitra arahintsika?